အုံ့မှိုင်းမှိုင်းဖြစ်နေတဲ့ ရာသီဥတုကြီးမှာ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်တွေကို ဘယ်လိုဖော်ရမလဲ ? - For her Myanmar
ပျင်းစရာ ရာသီဥတုကြီးကို အံတုပြီး တက်ကြွတဲ့ ကြက်ဖလေး ပြန်ဖြစ်လာဖို့…
ယောင်းတို့ရေ.. အခုလိုမိုးတွေ အုံ့မှိုင်းနေတဲ့ ရာသီဥတုမျိုးမှာ စိတ်တွေလေးလံထိုင်းမှိုင်းပြီး အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်တွေပျောက် စိတ်အားတက်ကြွမှုတွေ ပျောက်ဆုံးနေပြီလား? ဆိုရင်တော့ မင်မင်ဝေမျှပေးမယ့် အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်တွေ ဘယ်လိုပြန်ဖော်ရမလဲဆိုတဲ့ အချက်တွေကို အတူတူလေ့လာကြည့်ပြီး နိုးကြားတက်ကြွလာအောင် ပြန်လှုံ့ဆော်ကြည့်ရအောင်…
အလုပ်စားပွဲ အပြင်အဆင်ကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။
ယောင်းတို့က နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဒီစားပွဲခုံမှာပဲထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရတာဆိုတော့ အမြင်ရိုးအီလာပြီး ပျင်းရိစိတ်တွေကို ပိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒီတော့ ယောင်းနေ့တိုင်းမြင်နေကျ စားပွဲပေါ်ကပစ္စည်းတွေကိ်ု အသစ်လဲလှယ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ် အထားအသို ပုံစံပြောင်းလိုက်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်ပြီး အမြင်လန်းဆန်းအောင် ပြုလုပ်ပါ။
အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို သန့်ရှင်းပြီး အလင်းရောင်ရရှိအောင်ထားပါ။
ယောင်းတို့နေ့တိုင်း အလုပ်လုပ်နေကျ နေရာကို သန့်ရှင်းပြီး အလင်းရောင်ရရှိအောင် ထားပေးမယ်ဆိုရင် ယောင်းတို့စိတ်မှိုင်းထိုင်းတာကို ကြည်လင်လာစေပြီး နိုးကြားတက်ကြွလာစေမှာပါ။
Related Article >>> သူငယ်ချင်းနဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့အခါ အခင်အမင်မပျက် စီးပွားလည်းတက်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း(၄)ခု
အရေးတကြီး လုပ်ဆောင်ရမှာတွေကို စာရင်းလုပ်ပါ။
တစ်နေ့စာအတွက် အပြီးလုပ်ဆောင်ရမယ့် အလုပ်တွေကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ပြီး တတ်နိုင်သလောက် မြန်မြန်လုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ အလုပ်ဇောကပ်ပြီး အလုပ်အပေါ် အာရုံပိုစိုက်ထားတဲ့အတွက် အလုပ်မပြီးမချင်း စိတ်လွင့်ပြယ်မှာ မဟုတ်တော့ဘဲ အလုပ်ပိုပြီးမြောက်နိုင်မှာပါ။
ယောင်းတို့အနေနဲ့ တစ်ပတ်အတွင်း ဘယ်လိုတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ ရရှိနိုင်ရမယ်ဆိုပြီး ပန်းတိုင်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားပါ။ အရင်ကအလုပ် (၃)ခုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် ဒီအပတ်မှာတော့ ဘယ်လောက်ပိုလုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုထားပြီး လုပ်မယ်ဆိုရင် စိတ်ခွန်အားတက်ကြွမှု ပိုမိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Related Article >>> အလုပ်သစ်ပြောင်းချင်တဲ့အခါ ဒီမေးခွန်းလေးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါ
မင်မင်ဝေမျှပေးခဲ့တဲ့အချက်တွေက အုံ့မှိုင်းတဲ့ရာသီဥတုကြီးမှာ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်တွေ ပြန်လည်နိုးကြားလာအောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အမြဲနိုးကြားတက်ကြွပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာအောင်မြင်သူတွေ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေနော်….
ပငျြးစရာ ရာသီဥတုကွီးကို အံတုပွီး တကျကွှတဲ့ ကွကျဖလေး ပွနျဖွဈလာဖို့…
ယောငျးတို့ရေ.. အခုလိုမိုးတှေ အုံ့မှိုငျးနတေဲ့ ရာသီဥတုမြိုးမှာ စိတျတှလေေးလံထိုငျးမှိုငျးပွီး အလုပျလုပျခငျြစိတျတှပြေောကျ စိတျအားတကျကွှမှုတှေ ပြောကျဆုံးနပွေီလား? ဆိုရငျတော့ မငျမငျဝမြှေပေးမယျ့ အလုပျလုပျခငျြစိတျတှေ ဘယျလိုပွနျဖျောရမလဲဆိုတဲ့ အခကျြတှကေို အတူတူလလေ့ာကွညျ့ပွီး နိုးကွားတကျကွှလာအောငျ ပွနျလှုံ့ဆျောကွညျ့ရအောငျ…
အလုပျစားပှဲ အပွငျအဆငျကို ပွောငျးလဲလိုကျပါ။
ယောငျးတို့က နစေ့ဉျနတေို့ငျး ဒီစားပှဲခုံမှာပဲထိုငျပွီး အလုပျလုပျနရေတာဆိုတော့ အမွငျရိုးအီလာပွီး ပငျြးရိစိတျတှကေို ပိုဖွဈပျေါစပေါတယျ။ ဒီတော့ ယောငျးနတေို့ငျးမွငျနကြေ စားပှဲပျေါကပစ်စညျးတှကေို အသဈလဲလှယျလိုကျတာမြိုးဖွဈဖွဈ အထားအသို ပုံစံပွောငျးလိုကျတာမြိုးဖွဈဖွဈ ပွုလုပျပွီး အမွငျလနျးဆနျးအောငျ ပွုလုပျပါ။
အလုပျပတျဝနျးကငျြကို သနျ့ရှငျးပွီး အလငျးရောငျရရှိအောငျထားပါ။
ယောငျးတို့နတေို့ငျး အလုပျလုပျနကြေ နရောကို သနျ့ရှငျးပွီး အလငျးရောငျရရှိအောငျ ထားပေးမယျဆိုရငျ ယောငျးတို့စိတျမှိုငျးထိုငျးတာကို ကွညျလငျလာစပွေီး နိုးကွားတကျကွှလာစမှောပါ။
Related Article >>> သူငယျခငျြးနဲ့ အလုပျတှဲလုပျတဲ့အခါ အခငျအမငျမပကျြ စီးပှားလညျးတကျစမေယျ့ နညျးလမျးကောငျး(၄)ခု
အရေးတကွီး လုပျဆောငျရမှာတှကေို စာရငျးလုပျပါ။
တဈနစေ့ာအတှကျ အပွီးလုပျဆောငျရမယျ့ အလုပျတှကေို ဦးစားပေးလုပျဆောငျပွီး တတျနိုငျသလောကျ မွနျမွနျလုပျနိုငျဖို့ ကွိုးစားပါ။ အလုပျဇောကပျပွီး အလုပျအပျေါ အာရုံပိုစိုကျထားတဲ့အတှကျ အလုပျမပွီးမခငျြး စိတျလှငျ့ပွယျမှာ မဟုတျတော့ဘဲ အလုပျပိုပွီးမွောကျနိုငျမှာပါ။
ယောငျးတို့အနနေဲ့ တဈပတျအတှငျး ဘယျလိုတိုးတကျပွောငျးလဲမှုတှေ ရရှိနိုငျရမယျဆိုပွီး ပနျးတိုငျတဈခုသတျမှတျထားပါ။ အရငျကအလုပျ (၃)ခုလုပျနိုငျတယျဆိုရငျ ဒီအပတျမှာတော့ ဘယျလောကျပိုလုပျနိုငျရမယျဆိုတဲ့ သတျမှတျခကျြတဈခုထားပွီး လုပျမယျဆိုရငျ စိတျခှနျအားတကျကွှမှု ပိုမိုရရှိနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
Related Article >>> အလုပျသဈပွောငျးခငျြတဲ့အခါ ဒီမေးခှနျးလေးတှေ ကိုယျ့ကိုယျကိုမေးကွညျ့ပါ
မငျမငျဝမြှေပေးခဲ့တဲ့အခကျြတှကေ အုံ့မှိုငျးတဲ့ရာသီဥတုကွီးမှာ အလုပျလုပျခငျြစိတျတှေ ပွနျလညျနိုးကွားလာအောငျ တဈဖကျတဈလမျးကနေ စှမျးဆောငျပေးနိုငျလိမျ့မယျလို့ ယုံကွညျပါတယျ။ အမွဲနိုးကွားတကျကွှပွီး လုပျငနျးခှငျမှာအောငျမွငျသူတှေ ဖွဈနိုငျကွပါစနေျော….
Tags: Active, Career, Spirit, Weather, Working